Wasiirka Pekcan wuxuu Ku dhawaaqay Ganaaxyada Shirkadaha Qiima Jaban ku Kordhiyey | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWasiir Pekcan wuxuu Ku dhawaaqay Ganaaxyada Shirkadaha Ku Soo Kordha Qiimaha Kordhinta
26 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, coronavirus, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Wasiir Pekcan wuxuu sharraxay ganaaxa la siinayo shirkadaha leh qiimo koror xad dhaaf ah
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu shaaca ka qaaday in ganaax maamul oo dhan 198 milyan 10 kun 90 TL lagu soo rogay 60 shirkadood oo lagu helay inay fuliyeen sicir barar aan xaq ahayn.
Hadalka Wasiirka Pekcan waa sida soo socota: “Sida la ogsoon yahay, tilmaamaha Wasaaradda Ganacsigayagu waxay fiirineysaa 19 agaasimeyaal goboleed oo ku saabsan codsiyada u yimid Wasaaradeena oo la xiriirta kororka jeermis-dilaha, kolorta iyo qaar ka mid ah qiimaha cuntada, gaar ahaan maaskaro kahortaga coronavirus oo saameyn ku leh adduunka oo dhan (Covid 81). la siiyey oo kormeerku si dhakhso ah ayaa loo bilaabay.
Marka la eego baaxadda xisaabtan, Janaayo-Feebarwari 2020 qiimaha iibka, qiimaha iibka iyo qiimaha iibka imika ee alaabada ay khusayso hanti-dhawrku waxaa lagu go'aamiyey goobaha iibka ee gobollada oo dhan.
Ku saabsan qiimaha kontaroolada alaabada sida "maaskaro qalliinka iyo noocyada maaskaro 28.02.2020M ah, jeermis-dileyaasha, galoofiska qalliinka, antiseptik, bololo iyo baastada, digiraha iyo waxyaabaha kale ee cuntada ah" ee ay kormeereen Agaasimeyaasha Gobolkeenna illaa 25.03.2020-3; Tirada shirkadaha wax soo baadhay waa 6.448 tirada tirada alaabooyinka la soo hubiyayna waa 13.280.
Hawshan, 31.817 codsi ayaa loo sameeyay Agaasimeyaasha Gobolladayada iyada oo loo marayo Nidaamka Codsiga Kordhinta Cabashada Nidaamka Moobaylka iyo sidoo kale codsiyada 2.074 waxaa loo sameeyay Wasaaraddeenna iyada oo loo marayo CIMER.
Macluumaad muhiim ah ayaa lasiiyay muwaadiniinteenii sameysay codsiyadan iyo kormeerka goobta ayaa lagu sameeyay arrimaha u baahan kormeer.
Intaas waxaa sii dheer, Wasaaraddayada, Agaasinka Guud ee Ilaalinta Macaamiisha iyo Korjoogteynta Suuqa, waxay biloowday baaritaano horudhac ah oo ku saabsan shirkadaha iibiya websaydhka.
Wuxuu sheegay in qorista maqaal loo qeybiyay aaladaha lagu iibinayo alaabadaasi, iibiyaasha xumaanta ah ee isku dayaya inay u rogaan howsha hadda jirta fursad ay si dhaqso leh looga saari doono aagaggooda, haddii kale ay mas'uul ka noqon doonaan kuwa iibiya alaabooyinkan iyo kuwa ka shaqeeyaba.
Imtixaankii hore ee xafiiska offside-ka ah, daqiiqadihii baaritaanka xisaabtanka ee Agaasimeyaasha Ganacsi ee Gobollada iyo cabashooyinka ay muujiyeen muwaadiniinteena laftooda waxaa loo gudbiyay Gudiga Xayeysiinta ee ka howl gala Wasaaradeena.
Hawshan, Shirka Gudiga Xayeysiinta lambarka 10.03.2020, oo la qorsheeyay in la qabto 294, ayaa la qabtay 03.03.2020 iyadoo la qaadanayo usbuuc hore.Waxa kale oo kulanka lagu sheegay, dhaqanada 13 shirkadood / shaqsiyaad ku saabsan qiimaha maaskaro lagu soo bandhigo websaydhyo kala duwan ayaa laga dhigay ajandaha oo ay sameeyeen qiimo aan caddaalad ahayn. wuxuu dalbaday ganaax maamul oo ah 9 TL illaa 943.029 shirkadood oo la go'aamiyay.
Dhanka kale, iyadoo la tixgalinayo muhiimada maaddada, ayaa guddiga Ad waxaa loogu yeeray kulan aan caadi ahayn oo ay yeelaneyso Wasaaradeena markii labaad bishii Maarso, iyo codsiyada ay sameeyeen 25 shirkado ganacsi iyo websaydh, kuwaas oo dib u eegis lagu sameeyay shirkii la qabtay 2020kii Maarso 268, waxaana lagu soo daray ajandaha.
Baadhitaan iyo hanaan sharciyeed oo ku saabsan 6.335 shirkadood ayaa socda.
Natiijada baaritaanka ay sameeyeen Gudiga Xayeysiinta, waxaa la go'aamiyay in dhaqanada 189 shirkadood ay ka soo horjeedaan Sharciga Lambarka 6502 ee Ilaalinta Macaamiisha, iyo guud ahaan 9.147.031 TL oo ganaaxyo maamul ah ayaa laga qaaday shirkadahaas.
Xaaladda guud, marka la fiirinayo faahfaahinta go'aanka xayiraadda maamul ee su'aasha la weydiinayo
Isku darka 76 TL, oo ​​ay ku jiraan 104.781 TL shirkad kasta, illaa 7.963.356 ganacsato ah oo iibiya khadka internetka.
Wadarta 113 TL ee ganaaxyada maamulka ah ayaa laga dalbaday 10.475 shirkadood, kuwaas oo la go'aamiyay in ay lahaadaan qiimeyaal sareeya, oo ah 1.183.675 TL shirkad kasta.
Ku saabsan xayiraadaha maamulka, 111 maaskaro, 6 maaskaro iyo jeermis dile, 1 of maaskaro iyo burooyin, 36 jeermis-diliyaha, 26 of cologne, 1 ka tirtir qoyan iyo cologne, 2 ka tirtir qoyan iyo 6 ka mid ah waxyaabaha cuntada. waxay u muuqataa inay tahay.
Sidaa daraadeed, ganaax lacageed oo ah 198 TL ayaa lagu soo rogay 10.090.060 shirkadood oo lagu helay inay codsadeen sicir barar aan xaq ahayn oo ka dhacay laba kulan oo ay qabteen Gudiga Xayeysiinta bishii Maarso.
Waa macquul in lagu kordhiyo ganaaxa illaa 10 jeer haddii khilaafyada kor ku xusan la sii wado.
Si loo hubiyo amniga silsiladda gundhigga ah ee waxyaabaha daruuriga ah iyo cunnada cuntada ee Wasaaraddeena, howlaha xisaabinta ee lagama maarmaanka ah waa ay sii socon doonaan iyada oo aan la carqaladeynin kahor imaatinkayaasha, soosaarayaasha, iyo iibiyaasha waxaana cunaqabateyn lama huraan ah lagu qaadayaa kuwa lagu helo khilaafaadka. tibaaxaha loo adeegsaday.
Bursa Uludag waxay u muuqataa in ay kordhinayso qiimaha badeecadaha
Is-beddellada qiimaha kor u kaca qiimaha badeecada cabirka Uludağ
Ogeysiiska Soo Iibsiga: Waxaa laga soo xigtay go'aaminta NDG ee tijaabooyinka SSG iyo RTG Crane…
Ma jiraa qiimo kor u kaca qiimaha Eurasia?
Michelinin Tire Picker waxay hadda bixisaa baaritaan qiimahooda
BTSO waxay kordhinaysaa tayada shirkadaha leh UR-GE